McTube: ny solon'ny YouTube ho an'ny iPad | Vaovao IPhone
Andro hafa, Niditra ny fampiharana YouTube ofisialy aho alaina avy ao amin'ny App Store hijerena clip video misy mpanakanto, tampoka, satria eo am-pikatrohana ny fampiharana dia mihidy tampoka izy io. Nakatoko ny rindranasa marobe ary nanokatra Youtube indray aho, nitohy ny olana, ka nametraka ilay rindranasa indray aho ary mbola, ny olana dia nijanona.
Ka voatery aho mitady vahaolana hafa Youtube hijerena horonantsary amin'ny iPad-ko ary nahita roa aho: Safari o McTube. Nanapa-kevitra ny hanandrana an'i McTube aho, safidy tsara indrindra raha oharina amin'ireo hafa hitako. Raha manana olana mitovy amiko amin'ny Youtube ianao Manoro hevitra anao aho hampidina ity rindranasa ity. Andao hojerentsika ny fomba fiasan'izy io:
1 Pejy lehibe McTube
5 Mijere video
Pejy lehibe McTube
Raha vao miditra ny safidy YouTube hafa isika, McTube, (raha vao niditra ny angon-drakitra misy antsika) dia hanana sary mitovy amin'io:
Ao amin'ny lafiny ankavia Manana menio miaraka amin'ny sokajy YouTube miaraka amin'ny lohahevitra ankehitriny izahay. Manana safidy ihany koa izahay hijerena ny lisitry ny horonantsary vao haingana avy amin'ny famandrihana na ireo natolotry ny mpijery horonantsary.
Ao amin'ny ambany manana menio hafa miaraka amin'ny safidy 7 samy hafa izahay: Youtube, Kaonty, Fikarohana, Tantara, Ny horonantsariko, fanovana, Bebe kokoa.
Ary farany, ao amin'ny tapany afovoany, manana habaka voarindra amin'ny menio ankavia izahay. Izany hoe, raha mifidy ny famandrihana isika, eo amin'ny farany ambany dia hanana ny sary kely an'ireo horonan-tsary izay misy ifandraisany amin'ny famandrihana. Toy izany koa, raha tsindrio ny iray amin'ireo sokajy YouTube dia hiseho ireo horonantsary mifandraika amin'io sokajy io.
Raha mijery ny ambany ambany an'i McTube, hanana sary famantarana izahay izay milaza «kaonty«. Raha manindry isika dia hanana zavatra mitovy amin'izany:
Amin'ny lafiny ankavia dia manana ny antsika isika vaovao ny kaontinay sy ny Imagen TANTARANY. Ary eo amin'ny efijery sisa dia ananantsika ireo olona arahinay ao amin'ny YouTube, ny famandrihana.
Raha manohy amin'ny menio ambany McTube isika dia manana ny «fikarohana«. Hanana saha iray izay hofenoinay izay tadiavinay ao amin'ny YouTube izahay. Raha vantany vao vita ny fikarohana dia hanana safidy hafa isika:
maka hevitra horonan-tsary miaraka amin'ny teny fikarohana
maka hevitra fantsona miaraka amin'ny teny fikarohana
ireo safidy roa afaka voafidy eo an-tampon'ny fampiharana izy ireo.
Rehefa avy nandingana ny tantara sy ny lahatsarinay izahay dia nankany amin'ny Fikirana. Hanana karazana fikirana roa isika:
General: fiteny, tantara ...
Player: kalitaon'ny horonantsary efa voafaritra mialoha, efijery feno mandeha ho azy ...
Rehefa miditra isika hijery horonan-tsary amin'ny alalàn'ny McTube mahita zavatra toy izao isika:
El Video Io no kely indrindra hita nefa manana lahasa lehibe maromaro:
Ampio anaty lisitra
Ataovy miverimberina foana
Omeo hoe tiako ilay izy na tsy tiako
Safidio ny kalitaon'ny horonantsary
Eo ambanin'ilay horonan-tsary fotsiny isika famaritana horonan-tsary ankoatry ny fitsidihana e fampahalalana momba ny mpampiasa izay mampakatra ny horonantsary.
Farany ao amin'ny ampahany marina tenemos horonan-tsary mifandraika ilay milalao miaraka.
Fanazavana fanampiny - Hita ao amin'ny Youtube ireo horonantsary nandritra ny sesiona WWDC 2013
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » App store » McTube: ny solon'ny YouTube ho an'ny iPad
Ary talohan'ny namelany ny hisintona horonantsary dia io no fampiharana YouTube tsara indrindra tsy isalasalana.
Stuart dia hoy izy:
Io no fampiharana tsara indrindra hijerena horonantsary YouTube, mihoatra ny fampiharana ofisialy izay azo antoka !! Izaho manokana dia tiako ny famolavolana ary ny horonan-tsary dia lalaovina amin'ny efijery feno ary afaka misafidy ny karazana kalitaon'ny horonantsary isika !! Manoro hevitra azy ireo aho
Mamaly an'i Stuart
RM dia hoy izy:
Fa maninona no nesorina tao amin'ny magazay Apple? Inona koa, efa nividy azy aho saingy namerina namerina ny iPad ary tsy hitako intsony izany, inona no azoko atao?
Valiny amin'ny RM